နန်ချို (Nancho) | Moep1's Blog
၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း အထက်ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
(နေပြည်တော် မေ ၁၆၊ ၂၀၁၀ခုနှစ်)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီးဦးဇော်မင်းသည် မေ ၁၄ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား အရှေ့ဘက် ၂၆ မိုင်အကွာရှိ ပေါင်းလောင်းမြစ်ပေါ်၌ အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသော အထက်ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိစစ်ဆေးရာ စီမံကိန်း ရှင်းလင်းဆောင်၌ ညွှန်ကြားရေးမှူးက စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ လုပ်ငန်းများ ဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှုနှင့် ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းများအခြေအနေ၊ အဓိကပံ့ပိုးပစ္စည်းများရရှိမှုနှင့် လိုအပ်ချက် အခြေအနေများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးမြင့်ဇော်က ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ထို့နောက် ၀န်ကြီးက လုပ်ငန်းလိုအပ်ချက်များ ဖြည့်ဆည်းပေးပြီး လုပ်ငန်းများ အချိန်မီပြီးစီးရေးအတွက် လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် အချိန်ကာလများ သတ်မှတ်ဆောင်ရွက်ရေးကို ဆွေးနွေးမှာကြားသည်။
ယင်းနောက် ၀န်ကြီးသည် ကျောက်ထုတ်စခန်း၌ စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် ကျောက်များတူးဖော်နေမှု၊ Crushing Plant ရှိ ခွဲကျောက်များ စုဆောင်းထားရှိမှုနှင့် ခင်းကျင်းပြသထားသည့် ခွဲကျောက် နမူနာများကိုလည်းကောင်း၊ EL.(378-m) ရှိ ရှုရပ်မှ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ပင်မတမံ မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်နေမှု၊ ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမြေနေရာ၊ မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်ပြီးစီးမှုနှင့် ဆွဒ်ယာဒ် တည်ဆောက်မည့်နေရာ၊ SeparationWall (ရေကာကွန်ကရစ်နံရံ) တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုနှင့် Bottom Outlet Levelling Concrete လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်နေမှု တို့ကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ဆက်လက်၍ ပင်မတမံ Block-15- Levelling Concrete သွန်းလောင်းပြီးစီးမှုနှင့် Block – 16 – LevellingConcrete သွန်းလောင်းရန် ပြင်ဆင်နေမှု၊ High Tech Concrete Technology Co., Ltd. မှ RCC Full Scale Tria ပြုလုပ်မည့်နေရာ ပြင်ဆင်ထားရှိမှုအခြေအနေနှင့် RCC ကွန်ကရစ်ဖျော်စက် တပ်ဆင်ပြီးစီးမှုတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ထို့နောက် ၀န်ကြီးသည် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသို့ ရောက်ရှိပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ မြေနေရာအား စက်ယန္တရားကြီးများဖြင့် မြေကြီးကျောက်သားတူးဖော်နေမှု၊ ဆွဒ်ယာဒ်တည်ဆောက်မည့်နေရာ ရှင်းလင်းထားရှိမှုတို့ကို လည်းကောင်း၊ ရေထိန်းကန် ကွန်ကရစ်သွန်းလောင်းပြီးစီးမှု၊ ဆလူချောင်း ၀ဲဘက်ကမ်းရှိ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်အပိုင်း(၂) အထွက်ပိုင်း ဥမင်လိုဏ်တူးဖော်နေမှုနှင့် တူးဖော်ပြီးစီးမှု၊ ကျန်ရှိမှု၊ရေတံလျှောက် (P-1 & 2) ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်ထားရှိမှုနှင့် ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်အပိုင်း (၁)၊ ဥမင်လိုဏ် တူးဖော်ပြီးစီးမှုအား Lining Concrete လုပ်ငန်းဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု တို့ကိုလည်းကောင်း၊ ရေယူအဆောက်အအုံနှင့် ရေထိန်းတမံကွန်ကရစ် သွန်းလောင်းပြီးစီးမှု၊ ကျန်ရှိမှုနှင့် သွန်းလောင်းရန် ပြင်ဆင်နေမှုတို့ကိုလည်းကောင်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေးခဲ့ကြောင်းသတင်းရရှိသည်။
Comments Off on ၀န်ကြီး ဦးဇော်မင်း အထက်ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| နန်ချို (Nancho), အထက်ပေါင်းလောင်း (Upper Paunglaung)	| Permalink
လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ပေးမည့် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမှ နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း
နိုင်ငံတော်အစိုးရသည် မြန်မာနိုင်ငံအတွင်း ပေါများကြွယ်ဝလျက်ရှိသော ရေအရင်းအမြစ်များမှ ရေအား လျှပ်စစ် ထုတ်ယူပြီး ခေတ်မီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်သော နိုင်ငံတော်သစ် တည်ဆောက် အကောင်အထည် ဖော်ရာတွင် အဓိက ပါဝင်ဆောင်ရွက်ရန် ဟူသော ဦးတည်ချက်နှင့်အညီ ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများကို နိုင်ငံတော်က ဒေသအနှံ့တွင် အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသည်။ အကောင်အထည်ဖော်လျက်ရှိသော ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းများတွင် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား အရှေ့ဘက်၌ တည်ဆောက်နေသော နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းတစ်ခု ပါဝင်သည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းနယ်မြေသို့ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသက်ထွန်းနှင့်အတူ အရှေ့ရိုးမတောင်စွယ် တောင်ကြားကို ကွေ့ပတ်ကျော်ဖြတ်သွားရောက်ခဲ့ရာ စိမ်းစို သာယာနေသောသစ်တောများ အလွန်တွင် နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းဧရိယာသို့ ရောက်ရှိသည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းသည် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား အရှေ့ဘက် ၁၆ မိုင်ခန့်အကွာ ပေါင်းလောင်း မြစ် အတွင်းသို့ စီးဝင်သော နန်ချို ချောင်းဆုံနေရာ၏ အထက်ဘက် ခုနှစ်မိုင်ခန့် အကွာတွင် တည်ရှိသည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်း တည်ဆောက်ရခြင်း ရည်ရွည်ချက်သည် တည်ဆောက်ပြီးသော ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း၏ အထက်ဘက် ပေါင်းလောင်း မြစ်အတွင်းသို့ စီးဝင်သော နန်ချိုချောင်းမှ ရေအားလျှပ်စစ်ထုတ်ယူခြင်းဖြင့် လက်ရှိ ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ၏ နှစ်စဉ်လျှပ်စစ် ဓာတ်အားထုတ်လုပ်မှု တိုးတက်စေကာ နိုင်ငံတော်၏ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား လိုအပ်ချက်အား ဖြည့်ဆည်း ပေးရန်ဖြစ်သည်။
နန်ချိုချောင်းသည် ရေစီးကောင်းပြီး ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ကယားပြည်နယ် နယ်စပ်မှ စီးဆင်းလာကာ ပေါင်းလောင်းမြစ်ထဲသို့ စီးဝင်သည်။ စလူချောင်း၊ ဆောင်တောင်ချောင်းနှင့် စရစ်ချောင်းများကလည်း စီးဝင်ကြသည်။ နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းနှင့် ပတ်သက်၍ အချက်အလက်များကို လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလင်းနိုင်အေး (တည်ဆောက်ရေး-၁)က ရှင်းလင်းပြသသည်။ ထို့နောက် ဦးစီးအရာရှိ ဦးသက်ထွန်းနှင့်အတူ ကွင်းဆင်းလေ့လာခဲ့သည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်းကာလအတွင်း အသုံးပြုရန်အတွက် ဆောင်တောင်ချောင်းပေါ်တွင် ကီလိုဝပ် ၆၀ ရရှိသည့် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ တည်ဆောက်ခဲ့ရာ စီမံကိန်းဧရိယာနှင့် ၀န်ထမ်းအိမ်ရာများ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ရရှိခဲ့သည်။ နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းတွင် တည်ဆောက်မည့် ရေလှောင်တမံသည် တောင့်တင်းခိုင်မာသော ကွန်ကရစ်တမံ (EVE) (Over Flow Type)အမျိုးအစား ဖြစ်သည်။
ရေယူအဆောက်အအုံမှ ရေထိန်းကန်သို့ အလျားပေ ၇၃၃၀ နှင့် အချင်း ၁၅ ဒသမ ၅ ပေရှိ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်ဖြင့် ရေသွယ်ယူရာတွင် ဥမင်လိုဏ်သွားရာ လမ်းကြောင်းများ၌ စလူချောင်းက ဖြတ်သန်း စီးဆင်းလျက်ရှိနေသည်။ စလူချောင်း ၀ဲ၊ ယာ တွင် ရှိသည့် ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ် နှစ်ခုကို အချင်း ၁၅ ဒသမ ၅ ပေနှင့် အလျား ၃၈၄ ပေရှိ ရေတံလျှောက် ပိုက်လိုင်းဖြင့် ချောင်းပေါ်တွင် တံတားတည်ဆောက်၍ ဆက်သွယ်မည်ဖြစ်သည်။ တံတားအောက်ခြေတွင် ခိုင်ခံ့သော ကွန်ကရစ်တိုင် နှစ်တိုင်ဖြင့် ထောက်ထားမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကဲ့သို့ ပြုလုပ်ခြင်းအားဖြင့် စလူချောင်း ရေစီးရေလာ မပြတ်ရှိစေပြီး သဘာဝတောတောင်များ အလှမပျက်စီးစေရန် ဖြစ်သည်။ ယခုအခါတွင် ယာယီရေတားတမံ၊ ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန်လုပ်ငန်းများ၊ ရေထိန်းကန်များ တည်ဆောက်လျက်ရှိရာ ၂၀၁၀ ပြည့်နှစ်တွင် ပြီး တည်ဆောက်၍ နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ၁၅၂ သန်းခန့် ထုတ်လုပ်ဖြန့်ဖြူး ပေးသွားမည်ဖြစ်သည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်ဓာတ်အားပေးစက်ရုံမှာ အလျားပေ ၁၄၀၊ အနံ ၈၉ ပေနှင့် အမြင့် ၉၈ ပေ ရှိပြီး ဓာတ်အားပေးစက်ရုံတွင် မဂ္ဂါဝပ် ၂၀ အင်အားရှိ ဒေါင်လိုက် ဖရန်စစ်တာဘိုင် အမျိုးအစားနှစ်လုံး တပ်ဆင်၍ လျှပ်စစ်ဓာတ်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ ထုတ်လုပ်မည်ဖြစ်သည်။ နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ ထုတ်လုပ်မှု ဓာတ်အားမှာ ကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း ၁၅၂ သန်း ဖြစ်သည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စက်ရုံတွင် အလျား ၂၄၈ ပေ၊ အနံ ၁၄၁ ပေ၊ ဓာတ်အားခွဲရုံမှ တစ်ဆင့် မဟာ ဓာတ်အားလိုင်းသို့ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ဖြည့်ဆည်းပေးလွှတ်ပြီး တစ်နိုင်ငံလုံး ဖြန့်ကြက်၍ လျှပ်စစ် ဓာတ်အားများ ပို့လွှတ်မည်ဖြစ်သည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းမှ ဦးစီးအရာရှိ ဦးသက်ထွန်းက ရှင်းလင်းပြသရင်း မိမိတို့ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းကို သတ်မှတ်ချိန်အတွင်း ပြီးစီးရန် အင်ဂျင်နီယာ ၀န်ထမ်း(မြို့ပြ) ၂၃ ဦး၊ (စက်မှု) ၂ ဦး၊ လျှပ်စစ် ၂ ဦး နှင့် အခြားအဆင့် ၀န်ထမ်း (မြို့ပြ) ၃၅ ဦး၊ (စက်မှု) ၁၀ ဦး၊ ကျွမ်းကျင်လုပ်သားပေါင်း ၁၂၀ တို့က နေ့ညမနား ကြိုးစားဆောင်ရွက်နေကြောင်း ရှင်းလင်း ပြောပြသည်။
နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကြီး အောင်မြင်စွာ ပြီးစီးပြီးနောက် လက်ရှိ ပေါင်းလောင်း ရေအားလျှပ်စစ် ထုတ်လုပ်မှုကို နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ ပိုမိုထုတ်လုပ်မှု စွမ်းအား တိုးတက်စေသည့်အပြင် နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းကလည်း နှစ်စဉ် လျှပ်စစ်ဓာတ်အားများ တိုးတက်ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်သဖြင့် နိုင်ငံတော်နှင့် ပြည်သူများအတွက် အကျိုးကျေးဇူးများ ရရှိခံစားရမှာ ဖြစ်ကြောင်း ကွင်းဆင်းလေ့လာရေးသား တင်ပြလိုက်ရပါသည်။
Comments Off on လျှပ်စစ်ဓာတ်အား တိုးမြှင့် ထုတ်လုပ်ပေးမည့် နေပြည်တော် ပျဉ်းမနားမှ နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း	| နန်ချို (Nancho), ဆောင်းပါး (Article)	| Permalink
၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး
(နေပြည်တော် မတ် ၇ ၊ ၂၀၀၉)
အမှတ်(၁)လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း နေပြည်တော် ပျဉ်းမနား၏ အရှေ့ဘက် (၁၆)မိုင်ခန့်အကွာ ပေါင်းလောင်းမြစ်အတွင်းသို့ စီးဝင်သော နန်ချိုချောင်းဆုံနေရာ၏ အထက်ဘက် ခုနှစ်မိုင်ခန့်အကွာရှိ နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသို့ မတ် ၄ ရက် မွန်းလွဲပိုင်းတွင် ရောက်ရှိသည်။
ရှေးဦးစွာ ရှင်းလင်းဆောင်၌ တည်ဆောက်ရေးညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသောင်းဟန်က စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများကို ရှင်းလင်းတင်ပြပြီး ၀န်ကြီးက လိုအပ်ချက်များကို ဖြည့်ဆည်း၍ စီမံကိန်းလုပ်ငန်းများ အချိန်တိုအတွင်းပြီးစီးအောင် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်ကြရေး မှာကြားသည်။ ထို့နောက် ၀န်ကြီးသည် ပင်မတမံ အောက်ခြေမြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်နေမှုနှင့် တမံယာဘက်ကမ်း မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်နေမှု၊ ကွန်ကရစ်လုပ်ငန်း ဆောင်ရွက်နေမှု များနှင့် ဓာတ်အားပေးစက်ရုံ မြေနေရာ သဘာဝပိုဇိုလန် ကုန်ချောများသိုလှောင်ရန် သိုလှောင်ရုံများ တည်ဆောက်မည့် နေရာတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
အဆိုပါ နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် မဂ္ဂါဝပ် ၂၀ ရှိ စက်နှစ်လုံးဖြင့် စုစုပေါင်း စက်တပ်ဆင်အင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ မှ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ လျှပ်စစ်ဓာတ်အားကီလိုဝပ် နာရီသန်းပေါင်း ၁၅၂ သန်းခန့် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စီမံကိန်းတစ်လုံး ၃၀ ဒသမ ၅၂ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
Comments Off on ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်း နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း ကြည့်ရှုစစ်ဆေး	| နန်ချို (Nancho)	| Permalink
Nancho Hydropower Project 24.18 per cent complete
(YANGON,3Dec, 2008)
Minister for Electric Power (1) Col Zaw Min yesterday morning inspected Nancho Hydropower Project being undertaken by No. (1) Construction, about seven miles upstream the Nancho Creek in Nay Pyi Taw Pyinmana Township.
Director U Thaung Han of No. (1) Construction gave an account of the project, work progress, follow-up programmes, arrival of materials and requirements.
The minister called for stockpiling of construction materials and hard work for completion of the project ahead of schedule.
So far, the project has been completed by 24.18 per cent. Upon completion, it will be able to generate about 152 million kilowatt hoursayear.
Comments Off on Nancho Hydropower Project 24.18 per cent complete	| နန်ချို (Nancho)	| Permalink
(ရန်ကုန် ဒီဇင်ဘာ ၃၊ ၂၀၀၈)
အမှတ်(၁) လျှပ်စစ်စွမ်းအားဝန်ကြီးဌာန ၀န်ကြီး ဗိုလ်မှူးကြီးဇော်မင်းသည် ယမန်နေ့နံနက် ပိုင်းက နေပြည်တော်ပျဉ်းမနား နန်ချိုချောင်း၏ အထက်ဘက် ခုနှစ်မိုင်ခန့်အကွာရှိ အမှတ်(၁) တည်ဆောက်ရေးက အကောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်လျှက်ရှိသော နန်ချို ရေအားလျှပ်စစ် စီမံကိန်း လုပ်ငန်းခွင်အတွင်းရှိ ရေထိန်းကန်တည်ဆောက်မည့် မြေနေရာ မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်ထားရှိမှု၊ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်အထွက် လုပ်ငန်းအပိုင်း(၄)အတွင်းရှိ ဥမင်လိုဏ်တူးဖော်မှု၊ စလူချောင်းဝဲဘက်ကမ်းရှိ ရေသွယ်ဥမင်လိုဏ်အ၀င် လုပ်ငန်းအပိုင်း(၃)ရှိ ဥမင်လိုဏ် မြေကြီး ကျောက်သား တူးဖော်ထားမှု၊ ရေသွယ် ဥမင်လိုဏ် လုပ်ငန်းအပိုင်း(၁)ရှိ ဥမင်လိုဏ်အတွင်း ကွန်ကရစ်လိုင်နင် သွင်းလောင်းပြီးစီးမှုနှင့် ကွန်ကရစ် သွန်းလောင်းရန် ပြင်ဆင်နေမှု အခြေအနေတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးပြီး ပင်မတမံ တည်ဆောက်မည့်မြေနေရာ မြေကြီးကျောက်သား တူးဖော်ထားရှိမှု၊ ရေလွှဲရေထုတ်ပြွန် တည်ဆောက်ပြီးစီးမှုနှင့် ကျောက်ခွဲစက်မှ ကျောက်ထုတ်လုပ်မှု အခြေအနေတို့ကို ကြည့်ရှုစစ်ဆေးသည်။
ထို့နောက် ၀န်ကြီးအား စီမံကိန်းရှင်းလင်းဆောင်၌ အမှတ်(၁)တည်ဆောက်ရေး ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးသောင်းဟန်က စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ လုပ်ငန်းတစ်ခုချင်းအလိုက် ဆောင်ရွက်ရမည့် လုပ်ငန်း ပမာဏများနှင့် လက်ရှိဆောင်ရွက်ပြီးစီးမှု အခြေအနေများ၊ ဆက်လက်ဆောင်ရွက်မည့် လုပ်ငန်းအစီအစဉ်များနှင့် အဓိက ပံ့ပိုးပစ္စည်းရရှိမှု လိုအပ်ချက် အခြေအနေတို့ကို ရှင်းလင်း တင်ပြရာ ညွှန်ကြားရေးမှူးချုပ် ဦးဝင်းကြည်က ဖြည့်စွက်ရှင်းလင်းတင်ပြသည်။
ယင်းနောက် ၀န်ကြီးက လုပ်ငန်းခွင် သုံးပစ္စည်းများ စုဆောင်းထားရှိရေးနှင့် လုပ်ငန်းများ လျာထားချက်ထက် အချိန်တိုတွင်း အမြန်ပြီးစီးအောင် အားသွန်ခွန်စိုက် ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက် ကြရေးတို့ကို မှာကြားသည်။
အဆိုပါ နန်ချိုရေအားလျှပ်စစ်စီမံကိန်းသည် စက်တပ်ဆင်အင်အား မဂ္ဂါဝပ် ၄၀ မှ နှစ်စဉ်ပျမ်းမျှ လျှပ်စစ်ဓါတ်အား ကီလိုဝပ်နာရီသန်းပေါင်း ၁၅၂ သန်းခန့် ထုတ်လုပ်ပေးနိုင်မည်ဖြစ်ပြီး ယခုအခါ စီမံကိန်းတစ်ခုလုံး၏ ၂၄ ဒသမ ၁၈ ရာခိုင်နှုန်း ပြီးစီးနေပြီဖြစ်ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
You are currently browsing the archives for the နန်ချို (Nancho) category.